October 13, 2019 - CeleLove
October 13, 2019 Cele Love 0
ဖုန်းသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဖုန်းလေးလံနှေးကွေးခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ် … ။ ဒီတော့ […]
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ဟောစာတန်း (13-10-2019 မှ 19-10-2019 ထိ)
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ဟောစာတန်း (13-10-2019 မှ 19-10-2019 ထိ) ” တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ” အရေးမကြီးသောကိစ္စများအတွက် အချိန်ကုန်ခံခါ အလုပ်ရှုပ်မခံသင့်တဲ့ ကာလပါ မိမိလုပ်စရာရှိသောအလုပ်ကိုသာ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်လုပ်ကိုင်ပါ လုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မူ အခွင့်အလန်းများ ရရှိပါလိမ့်မည် ငွေကြေးအစုအပုံဝင်လိမ့်မည် စုတ်ရောလာဘ်ပါ ဝင်ကိန်းရှိပါသည် အဝါရောင်အသုံးအဆောင်များ […]
အောင်လအန်ဆန်၏ တိုက်စစ်ကြောင့် စိန်ခေါ်သူ ဗီရာ ဒဏ်ရာရရှိပြီး ပွဲအပြီး၌ ဝီးချဲဖြင့် ပို့ဆောင်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်
အောင်လအန်ဆန်၏ တိုက်စစ်ကြောင့် စိန်ခေါ်သူ ဗီရာ ဒဏ်ရာရရှိပြီး ပွဲအပြီး၌ ဝီးချဲဖြင့် ပို့ဆောင်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် အောင်လအန်ဆန်၏ တိုက်စစ်ကြောင့် စိန်ခေါ်သူ ဗီရာ ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး ပွဲအပြီး၌ ဝီးချဲဖြင့် ပို့ဆောင်သည့် ( ရုပ်သံ ) မြန်မာဖိုတ်တာ ပရိတ်သတ်များ မှတ်ချက်​ရေးသားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည် […]
ဂျပန်မြေမှာ သတ္တိသွေးပြပြီး ပြိုင်ဘက်ကို ပတ်တံတောင်နဲ့ပွဲသိမ်းပေးခဲ့သူ အောင်လအန်ဆန် (သို့) မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုထပ်ဆင့်ဆောင်သူ
ဂျပန်မြေမှာ သတ္တိသွေးပြပြီး ပြိုင်ဘက်ကို ပတ်တံတောင်နဲ့ပွဲသိမ်းပေးခဲ့သူ အောင်လအန်ဆန် (သို့) မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုထပ်ဆင့်ဆောင်သူ အောင်လအန်ဆန် (သို့) မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုထပ်ဆင့်ဆောင်သူ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဘရန်ဒန်ဗီရာကို နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းအတွက် သုံးသွားတဲ့ အဖွင့်တိုက်ကွက်က ပတ်တံတောင်ပါ။ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့စစ်စစ်ကို တစ်ချိန်လုံး သုံးသွားတာကို ပွဲကြည့်သူတွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ် … ။ ဒါဟာ […]
ဘရန်တန်ဗီရာကိုအနိုင်ယူကာ အာရှတိုက်ရဲ့အခမ်းနားဆုံးဖိုက်တာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ဘရန်တန်ဗီရာကိုအနိုင်ယူကာ အာရှတိုက်ရဲ့အခမ်းနားဆုံးဖိုက်တာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန် ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ ပွဲရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် Century အထူးပွဲကို တိုကျိုမြို့တော်မှာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း အောက်တိုဘာ၁၃ မှာ ကျင်းပနေပါတယ် … ။ ညနေပိုင်းပွဲစဉ်နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့ ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံမြန်မာ့စပါးအုံးအောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ရွှေခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ONE ရဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ […]
စနေ သားသမီး​လေးတို့ရဲ့ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထား အကြောင်း
စနေ သားသမီး​လေးတို့ရဲ့ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထား အကြောင်း စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကိုစရောက်ပြီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတတ်ကြပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ် … ။ ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက်မပြောတတ်ဘဲတိုက်ရိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တာ စနေပါပဲ .. ။အစွဲအလန်းကြီးတယ် … ။ အမှတ်တရတွေကိုသတိရနေတတ်တယ်။ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်ကြဘူး … ။ ဒေါသကြီးရင်လည်း […]
အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ဒိုင်ပွဲရပ် ပွဲသိမ်း နိုင်ခဲ့တယ် ပွဲစဉ်တွေ နှင့်တူ အောင်လနဲ့ ဗီရာပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရအောင် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ဒိုင်ပွဲရပ် ပွဲသိမ်း နိုင်ခဲ့တယ် ပွဲစဉ်တွေ ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ …. ။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ မြန်မာ့စပါးအုံး ဆိုပြီး အဖမ်း၊ အချုပ်မှာ နာမည်ကျော်သူ တယောက်ပါ … […]
အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ ပွဲ တိုက်ရိုက် (live) MAIN EVENT: Light Heavyweight World Championship Aung La N Sang vs. Brandon Vera CO-MAIN EVENTS: Lightweight Shinya Aoki […]
“မင်းကို ချစ်တဲ့သူထက် မင်းအကြောင်း နားလည်ပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဖို့ တကယ် ခက်လွန်းတယ်” ချစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်သက်သက်ပဲ…မင်းကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ အချစ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့ ခံစားတတ်ရုံမရဘူးမင်းမျက်နှာ အရိပ်အကဲဖတ်တတ်ရမယ် မင်းအကျင့်တွေ လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်…မင်းရဲ့စိတ်ကို လေ့လာတတ်ရမယ် … ။ ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို မင်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလား….ဒါဆိုရင် သူကိုစိတ်ဒုက္ခထပ်မပေးပါနဲ့တော့…မင်းစိတ်ကို […]
“ဒီနေ့ပွဲ မှာ အကောင်းဆုံး အောင်လ” ဖြစ်မယ် လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ် ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
“ဒီနေ့ပွဲ မှာ အကောင်းဆုံး အောင်လ” ဖြစ်မယ် လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ် ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီရာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုး သတ်မယ့် အောင်လအန်ဆန်က ပရိတ်သတ်တွေ ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် ကစားပေးမယ် လို့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ် …။ […]